के के हुनेछ नयाँ आइफोनमा? | Jukson
के के हुनेछ नयाँ आइफोनमा?
स्मार्टफोन पुस्तामाझ आइफोन आकर्षणको केन्द्र मानिन्छ। त्यसै कारण अमेरिकी कम्पनी एप्पलको उत्पादन आइफोन संसारभरि लोकप्रिय छ। पछिल्लो समय एप्पलले पुस्ता सुहाउँदो आइफोन सेरिज उत्पादन गर्दै आएको छ। गत सेप्टेम्बरमा आइफोन ६ र आइफोन ६ प्लस बजारमा ल्याएसँगै अर्को आइफोन कस्तो हुनेबारे चर्चा चल्ने गरेको थियो। त्यो चर्चा अब केही महिनामै साँचो परिणत हुँदैछ।
ब्लुमबर्ग रिपोर्टले आउँदो सेप्टेम्बरमै एप्पलले आइफोन ६ एक्स, आइफोन ६ एक्स प्लस र आइफोन ७ सार्वजनिक हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ।
के के हुनेछ त नयाँ आइफोनमा? ब्लुमबर्गले त्यसका सम्भावित फिचरबारे उल्लेख गरेका छन् । आइफोनको क्यामेरा अब १२ मेगापिक्सलको हुनेछ। कम प्रकाशमै राम्रा तस्बिर/भिडियो खिच्न सकिने विशेषता पनि यसमा हुनेछ। अहिले आइफोनमा ८ मेगापिक्सल क्यामेरामात्र छ। यसमा फोर्स टर्चको विशेषता पनि हुनेछ। जुन हालसालै म्याकबुकमा ल्याइएको थियो।
नयाँ आइफोनमा एलटीइ एमडीएम ९६३५ एम क्वालकम चिप्स पनि राखिएको छ। जसले डाउनलोड स्पिड दुई गुणाले छिटो हुनेछ। यसले ब्याट्री लाइफलाई जोगाउन पनि मद्दत गर्छ।
होटलमा निशुल्क वाइफाई छ?
यस्तो रेष्टुराँ जाहाँ ग्राहकलाई रोबर्टले खाना पुर्‍याउछ